बिनोद भण्डारी बन्न सक्छन् नयाँ नेपाली क्रिकेट कप्तान ! यस्तो भित्री कारण – Nepal Trending
On ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:५६
काठमाडौं । पारस खड्काले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानी छाडेको घोषणा गरेपछि नयाँ कप्तान को बन्ला भन्ने चासो बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले क्यान निलम्बन फुकुवा गरेकाले अब नेपाली क्रिकेटको सम्पूर्ण जिम्मा क्यान आफैंले व्यवस्थापन गर्नेछ । खेलाडी छनोटदेखि क्रिकेटको विकासका लागि आवश्यक रणनीति क्यानले आफैंले गर्न पाउँछ । तर, क्यान निलम्बन फुकुवा भएको भोलिपल्टै कप्तान पारसको अप्रत्याशित राजीनामाले क्रिकेट जगत र खेलप्रेमीले नयाँ तरङ्ग पैदा भने गरेको छ ।
एकदिवसीय र टि–ट्वान्टी मान्यताप्राप्त नेपाली टोलीले क्यानको अभिभावकत्व पाएको अवस्थामा पारसले अझै केही समय नेपाली टिमको नेतृत्व गर्नु नै उपयुक्त थियो भन्ने एकाथरीको तर्क छ भने अर्काेतिर नयाँलाई अवसर दिने सही समय आएको भन्नेहरु पनि छन् । क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भने पारसका लागि राजीनामाको निर्णय सरल लागे पनि क्यान र नेपाली क्रिकेटका लागि अप्रत्याशित भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘‘नेपाली क्रिकेटका लागि सकारात्मक माहोल बनिरहेका बेला पारसको राजीनामाको कुराले दुःखी बनाएको छ ।
उहाँले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । यसबारेमा हामी बसेर थप छलफल गर्नसक्छौं ।’’ अध्यक्ष चन्दले नेपाली क्रिकेटमा पारसले गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । चन्दले भने, ‘‘हामीले क्रिकेटलाई नयाँ गति दिने समय आएको छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । क्यान खुला हृदयले छलफल गर्न तयार छ ।’’
सन् २००९ देखि राष्ट्रिय टिम नेतृत्व गरेका पारस सबैभन्दा सफल कप्तान हुन् । पारसकै कप्तानीमा नेपालले सन् २०१४ मा टि–ट्वान्टी विश्वकप खलेको थियो भने उनकै नेतृत्वमा एकदिवसीय मान्यता समेत प्राप्त गरेको थियो । तर, पारसले अब आफू खेलाडीमा रुपमा खेल्ने तर कप्तानको रुपमा नफर्किने बताएको अवस्थामा नयाँ कप्तान को बन्ला भन्ने चासो बढेको छ ।
हाल राष्ट्रिय टोलीको उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल हुन् । यस्तोमा ज्ञानेन्द्र मल्ल नै कप्तान हुनसक्ने अनुमान पनि छ । नयाँ कप्तानको रुपमा चारजनाको नाम चर्चामा छ–ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, विनोद भण्डारी र दिपेन्द्रसिंह ऐरी । चारमध्ये विनोद भण्डारीको सम्भावना बढी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
विनोद भण्डारीको सम्भावना किन ?
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नियमित विकेटकिपर ब्याट्सम्यान हुन् विनोद भण्डारी । कञ्चनपुरबाट क्रिकेट करियर सुरु गरेका विनोद ‘हार्ड हिटर’का रुपमा परिचित छन् । घरेलु क्रिकेटमा उनी नेपाल आर्मी क्लब, महेन्द्रनगर युनाइटेड लगायत अन्य घरेलु लिगमा विभिन्न टोलीको कप्तानी गर्छन् ।
राष्ट्रिय टोलीबाट उनको प्रदर्शनमा एकरुपता देखिँदैन । तर घरेलु लिगमा विनोद आफ्नो छाप सधैंजसो छोड्न सफल छन् । त्यसैले उनी राष्ट्रिय टोलीमा प्रायजसो पर्छन् । दुई साताअघि हङकङविरुद्ध ५८ रनको अविजित इनिङ खेलेर नेपाललाई टि–ट्वान्टीमा जित दिलाएका थिए उनले ।
घरेलु लिगमा विनोदको कप्तानीलाई औसत मानिन्छ । आफ्नो विस्फोटक ब्याटिङबाट खेल परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता विनोदमा छ । उमेर ३० टेक्न केही महिनामात्र बाँकी रहेका विनोदले हालसम्म खेलेका तीन एकदिवसीय खेलमा ११.६६ को औसतमा ३५ रन बनाएका छन् । जसमा उनको उच्चतम स्कोर २१ छ । २१ टि–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय इनिङमा उनले १७.४० को औसतमा २६१ रन बनाएका छन्, ।
जसमा दुई अर्धशतक समावेश छन् । उच्चतम स्कोर ५८ छ । लिस्ट ए मा २३ इनिङमा २०.५२ को औसतमा ४३१ रन बनाएका छन् । स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०२२ सम्म नेपालले विश्वस्तरीय प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने छैन । दुई वर्ष विभिन्न देशसँग सिरिज खेल्ने र घरेलु क्रिकेटलाई बलियो पार्ने समय नेपालसँग छ । यस्तोमा विनोद भण्डारी कप्तानको बलियो विकल्प बनेको स्रोतको दाबी छ ।
हामीले यो खबर बाह्रखरी डट कमबाट साभार गरेका हौ ।